Nhau - 2021 Honda CRF300L uye CRF300L American Rally yakaziviswa
Sekufungidzira kwakaita Dennis Chung, murume weHonda muToronto, Honda Europe paakazivisa nhau kutanga kwaZvita, mota nyowani itsva uye yakagadziridzwa yevanhu vaviri yemota inopinda mumusika weUS. Muchokwadi, Honda akataura kuti CRF ndiyo inonyanya kutengeswa mitambo miviri muindastiri yemidhudhudhu.
Iine CRF300L nyowani uye CRF300L Rally, iro basa nderekuwedzera simba, kudzikisa huremu nekuvandudza mashandiro emugwagwa? "Pasina kupa kukosha, kuvimbika uye chimiro chechitarisiko, hunhu uhwu, kukosha uye kuvimbika zvakaita basa rakakosha mukuzivikanwa kwemuchina." Kunyangwe isu tichinzwisisa kuti michina miviri iyi ingangoita zvakafanana mukushanda, kunze kwekuwanda kwemafuta, pamusoro pekusiyana pakati peyakajairika ruoko rwekuchengetedza pamwe nefafitera remhepo remotokari yerally, isu tinosanganisirawo kuburitswa kuzere kweHonda kwemhando mbiri idzi pazasi.
Kuwedzera simba uye torque zvinowanikwa nekuwedzera kusuduruka ne15% -kubva pa250 kusvika pa286 cc apo zvakare ichivandudza mashandiro emugwagwa nekuwedzera kusimiswa sitiroko uye kubvumidzwa kwepasi. Panguva imwecheteyo, Honda akataura kuti huremu hwese hwemotokari hwadzikiswa nemapaundi gumi nerimwe, ayo anonyanya kuwanikwa kuburikidza nekushandisa komputa-yakabatsira mainjiniya kuongorora kukwidziridza hukobvu hweplate uye saizi yetubing pazvinhu zvisingaverengeke. Iwo matayipi ekuraira anouya kubva kuHonda's CRF Performance akateedzana, nepo MSRP ichiri "yemakwikwi kwazvo."
Kubudikidza nemuviri wayo uye tsvuku, chena, nhema uye bhuruu mifananidzo, CRF300L inovavarira kutevedzera kutaridzika kweCRF Performance nhevedzano, kusanganisira Baja-based CRF450X.
Nzvimbo yekutasva Nzvimbo yekutasva yakashandurwa kunatsiridza mutyairi kuisa uye kufamba kwemotokari. Iyo yekutsvaira kona yemubato inowedzerwa kuita kuti chinzvimbo chegokora chinyanye kusikwa, mafambisi ari nyore, uye huremu hwebato rinowedzerwa kudzikisa kudedera. Hupamhi hwenzvimbo dzekumashure nepakati pechigaro dzinoramba dzakangofanana kuchengetedza nyaradzo, nepo nzvimbo yepamberi iri nhete kuvandudza kupinda kwevatasvi kuburikidza nezvidya nemabvi. Tsoka dzetsoka dzinotamisirwa kumashure, nokudaro zvichirerutsa mashandiro etsoka eiyo switch lever uye brake pedal, uye kurudyi kumashure rocker ruoko pivot chifukidziro chakagadzirwazve kuti kudzikise hupamhi. Yevapfuuri yekufambisa zvikorekedzo zvinopihwa zvakare.
Meter Iyo nyowani mita ine vatema mavara pane chena kumashure, uye mavara ari 6 mm akakurisa kuvandudza kuoneka. Pamusoro pekumhanyisa, wachi uye kuverenga rpm, maficha matsva akawedzerwa, kusanganisira nzvimbo dzegear, mafuta emagera uye mafuta. Iyo mita inoderedzwawo ne0.01 mapaundi.
Iyo injini / yekufambisa system yakatanga kubva paCRF250L, Honda yakagadzirisa iyo mvura-yakatonhorera imwechete-humburumbira ina-sitiroko magetsi chirimwa, ichiwedzera sitiroko ne 8 mm (yakazara 63.0 mm), ichichengeta humburumbira dhayamita ye76.0 mm isina kuchinjika. Izvi zvakakonzera kuwedzera kwemakumi matanhatu neshanu mukubviswa kwevanhu, kwehuwandu hwe660cc, izvo zvakakonzera zita shanduko kuita CRF300L. Iyo refu pisitoni sitiroko inowedzera simba uye torque mukati meiyo yese yekumhanya nhanho.
Uye zvakare, iyo camshaft yakashandurawo kusimudza uye nguva yekuwedzera kuburitsa muchikamu chezasi cheiyo spidhi yekumhanya, iyo inowanzo shandiswa mukutasva kweguta uye off-road kutyaira.
Dhizaini yekudyiwa / yekudzimisa mweya firita yakagadziridzwa kuchengetedza iyo 38 mm hombe throttle muviri uye inosanganisa nyowani yekudzimisa sisitimu ine yakareruka musoro uye isina kugadzikana-kunyangwe Iyo kudzikiswa kwezwi kuburitsa kunoitwa kuburikidza nekuvandudzwa kwekutonga kwekutetemera. Yakasanganiswa, shanduko idzi dzinogona kuvandudza kudzora kwekupwanya, kunyanya pazasi revs.
Sapakutanga, injini yemagetsi inoshandisa rocker ruoko dhizaini kuti iwane compact cylinder musoro, nepo balancer ichigona kushanda mushe.
Iyo giya reshiyo yematanhatu-anomira gearbox yakagadziridzwa muna 2021. Daro pakati pemagiya ekumhanya-diki idiki, uye chinhambwe pamagaidhi-ekumhanyisa ari makuru, kuitira kuti sarudzo yakasarudzwa yegiya inogona kuitwa uchiri kuwana kugadzikana. kumhanya kwakanyanya. rwendo. Izvi zvinoratidzira chiyero chakanaka pakati pekushandisa kwemaguta. , Kureba uye kure-munzira kunyorera.
Iyo batira yakarumbidzwa neyakareruka clutch dhonza. Iyo modhi ichave neyakareruka kudhonza (ingangoita 20%) muna 2021, nekuda kweiyo nyowani yekubatsira / yekutsvedza batira, iyo zvakare inopa kuita kuri nani panguva yekushanda kudzikira.
Chassis / kuturika Kunyangwe injini iine simba, chimiro chezvinhu zvakawanda chakasiyana, izvo zvinoderedza huremu hwemotokari. Semuenzaniso, iyo yakadzika katatu kirampiki ikozvino yakagadzirwa nealuminium pachinzvimbo chesimbi, uye huremu hwaderedzwa ne01 lb. Izvi hazvingogumisi pakuderedzwa kwesimba rekutungamira, asi nekuti kudonha kwekurema kunoitika zvakanyanya pamusoro pemotokari, pakati Giravhiti zvakare iri pasi.
Nekugadzirisa zvikamu zvikuru zvefuremu, huremu hwepuremu hwaderedzwa ne0,3 mapaundi, nepo kuomarara kwekupedzisira kuchideredzwa ne25%, zvichidaro kunatsiridza manejimendi uye kunzwa kwekugara: iyo yepasi chubhu inoderedzwa ne30 mm; iyo yepasi chubhu gusset Diki; iyo huru pombi ndeye 20 mm ipfupi; iyo dhayamita yeiyo stent chubhu yakaderedzwa ne3.2 mm kusvika 25.4 mm.
Uye zvakare, kudzokorodzwa kune iyo furemu uye crankcase dhizaini kwakawedzera kuchenesa kwepasi nema 1.2 inches, nokudaro ichideredza mukana wekupindirwa kana uchityaira mumamiriro akashata asiri munzira.
Bhureki rakasimba uye rinogona kuramba kupfugama, uye tsoka yaro yetsoka ikozvino 10% yakakura kugadzirisa kugadzikana kwemotokari kana kupaka.
Ruoko rwemberi rwedombo rwakafanana nefuremu, uye kuomarara uye kuomarara kwekutenderedza kweruoko rwemashure kwakaderedzwa ne23% uye 17%, zvichiteerana. Hupamhi padhuze nepivot hwaderedzwa nemamirimita gumi nemashanu, uye chikamu chese chegungano chakachinjwa kuti chipe zvakanyanyisa kugoverwa kwekukanganisa, zvichikonzera kunzwa kuri nani uye kubata kunofungidzirwa. Kurema kweiyo rocker ruoko kwakadzikiswa zvakare ne0.08 mapaundi-kudzikisira huremu hwematsutso, nokudaro nekuvandudza kusimudzira chiito.
Kumiswa Sezvambotaurwa, kumiswa kwacho kunosanganisira 43mm Showa inverted fork uye Pro-Link imwechete yekuvhunduka kumashure system. Nekudaro, sitiroko yekumisa yakawedzerwa, uye kumberi nekumashure kufamba kwevhiri kuri 10.2 inches, kuwedzera kwe0,4 inches uye .6 inches, zvichiteerana. Izvo zvigadziriso zvakagadziridzwa uye nyowani kumashure maumboni uye zvinongedzo zvashandiswa. Iyo mhedzisiro inosanganiswa ndeye kuvandudzwa kwekumiswa kwekuita, kunyanya panguva yekutasva-munzira.
Hydraulic mabhureki anoshandiswa pamberi uye mushure mekumhara. Iwo ma rotors ane 256 ne220 mm rotors zvichiteerana, pamwe neiripo ABS, iyo inogona kunyatso kudzora mabhureki mumamiriro akasiyana siyana. Saizvozvowo dhizaini inoshandiswa paCRF Performance akateedzana, iyo nyowani yekumashure mabhureki tenzi humburumbira ine tangi remafuta. Izvi zvinoponesa kudiwa kwekubatanidza tangi remvura riri kure kune iro rakambogadzirwa pombi, zvichikonzera kuoneka kwakachena. Zviri nyore, ABS inogona kudzimwa kumashure kuti ipe imwe yekukwira kunzwa mune yekunze-nzira mamiriro.
Mavhiri acho akafanana neakakwira-mashandiro emuchina wemugwagwa. Saizi yemavhiri ndeye 21 inches kumavhiri epamberi uye 18 inches kune mavhiri ekumashure. Vanogona kutenderera mushe pane yakaoma nzvimbo. Inofananidzwa neiyo 2020 modhi, iwo matema ealuminium marimu akapukutwa, ane chimiro chinopenya, uye zviri nyore kuchenesa.
Iyo yekumashure sprocket yakatetepa mune dzimwe nzvimbo uye ine zvidiki mabhaudhi (M8 pachinzvimbo cheM10), iyo inochengetedza 0.04 mapaundi. Iyo yekumberi axle ikozvino ine mhango uye yakaveurwa ingangoita 0.03 mapaundi.
Zvishongedzo Honda inopa zvakawanda zvishongedzo, zvinosanganisira varindi vemaoko, anti-skid mahwendefa, zvigadziko zvemagetsi, hombe spikes, mabhokisi epamusoro, machira, nezvimwe.
Iyo CRF300L Rally yakagadzirirwa kumutsa mufananidzo weRicky Brabec kuhwina iyo CRF450 Rally yeDakar Rally. Iyo yakavakirwa pane yakajairwa CRF300L asi iine hukuru hukuru hwemagetsi, ruoko rwekuchengetedza uye yakavezwa fafitera remhepo, ichiita kuti ive yakanaka kune marefu-marefu maresitoresi Pasina kubhadhara kwekukurumidza, iyo CRF300L rally ine hombe peturu tangi uye inorema mapaundi mapfumbamwe mumadhorobha traffic uye kunyange munzira. Zvishoma pane iyo yapfuura modhi, iyo yekumisikidza yakawedzerwa ne15%, nokudaro ichiwedzera simba uye torque, zvichiita kuti kureba-kure kure kuve nyore kupfuura nakare kose.
Modeling Muna 2021, Honda vagadziri vakatora iyo iripo CRF250L rally kuti iwedzere kushamisika, ichiwedzera peturu tangi ne25% (0.7 marita pamazana e3,4 galoni, akanyanya mukirasi yayo). Tichifunga nezve yakanakisa hupfumi hwehupfumi hweiyi modhi, iyo CRF300L ine yakati wandei bvunzo muyedzo yemakiromita anopfuura mazana maviri nemakumi mashanu.
Kunge tensile muchina paMonster Energy Honda fekitori, iyo yekumashure inochengetwa yakatetepa, zvinoita kuti zvive nyore kuti mutasvi afambe uye aise moyo wekunze kumberi kwemotokari. Mifananidzo inobata maziso matsvuku, machena, matema uye ebhuruu anotevedzera kutaridzika kweCRF Performance nhepfenyuro.
Yakadzora huremu hwezvikamu zvakawanda, kusanganisira yepamberi fender (yakaderedzwa ne0.02 mapaundi), mabutiro emumativi (akaderedzwa ne0.05 mapaundi), bhokisi rekushandisa (rakaderedzwa ne0.03 mapaundi) uye rezinesi replate (yakaderedzwa ne0.04 mapaundi).
Kutasva chinzvimbo Panguva imwecheteyo, chinzvimbo chekutasva chakashandurwa kunatsiridza mutyairi wekupinza uye kugona kwemotokari. Kuitira kuti chigaro chegokora chive chakareruka, mudhiraivho wakareruka, simba rekutsvaira rinowedzerwa, uye zviyereso zviviri zvekubata (5.8 maunzi imwe neimwe) zvinowedzerwa kudzikisa kuzungunuka, uye rabha inowedzerwa kumakumbo etsoka nechikonzero chimwe chete chikuva . Iyo chigaro inoshandisa nyowani yerabha yekumisikidza pad. Inofananidzwa neyakajairwa modhi, upamhi hwayo hwakawedzerwa ne20 mm kusvika 190 mm, kunyangwe iyo yekumberi inochengetwa yakatetepa kubvumira tsoka dzemutasvi kuti abate pasi kana zvichidikanwa. Vatakurwi zvekufambisa zvikorekedzo zvakajairika michina.
Tsoka dzetsoka dzinotamisirwa kumashure, nokudaro zvichirerutsa mashandiro etsoka eiyo switch lever uye brake pedal, uye kurudyi kumashure rocker ruoko pivot chifukidziro chakagadzirwazve kuti kudzikise hupamhi.
Meter Iyo nyowani yedhijitari mita ine vatema mavara pane chena kumashure uye mavara ari 6 mm akakurisa kuvandudza kuoneka. Pamusoro pekumhanyisa, wachi uye kuverenga rpm, maficha matsva akawedzerwa, kusanganisira nzvimbo dzegear, mafuta emagera uye mafuta. Iyo mita inoderedzwawo ne0.01 mapaundi.
Iyo injini / yekufambisa system yakatanga kubva kuCRF250L rally. Honda akagadzirisa iyo mvura-yakatonhorera imwe-humburumbira ina-sitiroko magetsi chirimwa, ichiwedzera sitiroko ne 8 mm (yakazara 63.0 mm), ichisiya bore ye 76.0 mm isina kuchinjika. Izvi zvakakonzera kuwedzera kwemakumi matanhatu neshanu mukubviswa kwevanhu, kusvika pahuwandu hwe666cc, izvo zvakakonzera zita shanduko kuita CRF300L Rally. Iyo refu pisitoni sitiroko inowedzera simba uye torque mukati meiyo yese yekumhanya nhanho.
Nekugadzirisa zvikamu zvikuru zvefuremu, kuomarara kweiyo furemu kwakaderedzwa ne25%, iyo inovandudza maneuverability uye mutasva kunzwa, uye huremu hwepuremu hwaderedzwa ne0,3 mapaundi: iyo yepasi chubhu yakatetepa ne30 mm; iyo yepasi chubhu Iyo gusset idiki; iyo huru pombi ndeye 20 mm ipfupi; iyo dhayamita yeiyo stent chubhu yakaderedzwa ne3.2 mm kusvika 25.4 mm.
Iyo imwechete-chidimbu chakakanda aruminiyamu kumashure kwesimbi ruoko inovandudza iyo yakagadziriswa kukotama hunhu, uye iyo yekupedzisira uye torsional kuomarara inoderedzwa ne23% uye 17%, zvichiteerana. Hupamhi padhuze nepivot axis hwaderedzwa nemamirimita gumi nemashanu, uye chikamu chepakati chechikamu chakashandurwa kuti chigovane zvakanyanya kutsauswa, zvichikonzera kunzwa kuri nani uye kubata kunofungidzirwa. Kurema kweiyo rocker ruoko kwakadzikiswa zvakare ne0.08 mapaundi-kudzikisira huremu hwematsutso, nokudaro nekuvandudza kusimudzira chiito.
Kumiswa Sezvambotaurwa, kumiswa kwacho kunosanganisira 43mm Showa inverted fork uye Pro-Link imwechete yekuvhunduka kumashure system. Iwo kurohwa kwemavhiri epamberi nekumashure ari 10.2 inches uye 10.4 inches, zvichiteerana.
Iyo yekumashure sprocket yakatetepa mune dzimwe nzvimbo uye ine zvidiki mabhaudhi (M8 pachinzvimbo cheM10), iyo inochengetedza 0.03 mapaundi ehuremu. Iyo yekumberi axle ikozvino haina mhango, ichideredza iyo yekuwedzera kukwenya ne0.02 mapaundi.
Zvishongedzo Honda inopa zvakawanda zvishongedzo, zvinosanganisira zvigadziko zvemagetsi, zvakafara spikes, anopisa anopisa, epamusoro mabhokisi, machira, nezvimwe.
Iva mukati meMudhudhudhu.com. Kutanga kunyorera kune yedu tsamba tsamba kuti utore yazvino mudhudhudhu nhau.